Ụzọ nile nke mmeputakwa nke Schizandra Shia, anyị na-amụ nuances - Chinese Lemongrass - 2019
Chinese lemongrass na ọnọdụ ndị dị ndụ bi na China, Korea, Japan, n'ebe ugwu Russia. Osisi a na-etolite n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe nile: larịị, ugwu, n'akụkụ osimiri na iyi.
Chinese lemongrass bụ osisi na-abụghị ndị na-adọrọ adọrọ na ọ bụ nke ọma acclimatized na atụmatụ ndị dacha.
Otu esi akụ osisi
Esi lekọta seedlings
Otu esi egbutu osisi
Olee otú mgba lemongrass mgbọrọgwụ usoro (overgrowth)
Akwukwo Lemongrass site na nkerisi ohia
Esi esi kpochapu osisi vine magnolia vine
Mbelata na iwe, lemongrass mkpụrụ mmeputakwa
Osisi a na-eguzogide ọgwụ na oyi na oke okpomọkụ, ya mere, a pụkwara ịgbasa magnolia vine na mpaghara dị n'ebe ugwu na nnukwu mmeri. Ot'odi, onye kwesiri imata na mmiri adighi adi na lemongrass, ya mere ya na oke mmiri nke mmiri ozuzo kwesiri ime ka odi nma.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ntorobịa niile na-ata ahụhụ n'ihi enweghị mmiri. Maka akuku lemongrass choro ebe di nma, nke oma na ala humus. Mmeghachi omume nke ala ka mma na-anọpụ iche. A ghaghị itinye aja na ala ala dị arọ, nke a na-agwakọta ya na udu mmiri na ala nke ala, ma ọ bụ ihe ndị dị na peaty ma ọ bụ ájá.
Ọ bụrụ na ala mmiri na-eru nso n'elu, ọ ka mma ịkụ osisi lemongrass na elu.
Ị ma? Ndị bi n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa, na-achọ ịchụ nta, na-ekwu na ọnụ ọgụgụ dị mkpirikpi nke tomato nke lemongrass nwere ike imeju agụụ, nye ume ma mekwuo ihe anya.
Tụlee otú e si akụ lemongrass si ná mkpụrụ. A na-egbute osisi nke osisi site na tomato. Ọ dị ha mkpa ịsacha ọtụtụ ugboro ma kpoo nke ọma.
Ị nwere ike ịgha mkpụrụ na ọdịda na akwa ruo omimi nke ihe dị ka cm 3. Mgbe oge oyi gasịrị, na njedebe oge opupu ihe ubi Ome apụta.
N'ihi na ịgha mkpụrụ na mmiri osisi kwesịrị ịkwadebe. Maka nmalite, n'ime otu ọnwa, a na-edebe mkpụrụ osisi na ájá ájá na 20 Celsius. Otu ugboro n'izu, a na-ewepụ mkpụrụ osisi ahụ, saa ya ma kwọọ ya ruo minit ise. Mgbe ahụ, mkpụrụ osisi ahụ na-ejikarị usoro oyi maka ihe dịka otu ọnwa na 0 Celsius, nakwa na ájá ájá.
Mgbe osisi na-amalite ịgbawa, a na-akụ ha na igbe na ala dị njikere: ụwa, peat na ájá (1: 2: 1). Agha na-agha mkpuru ihe di omimi nke okara centimita n'otu ebe di anya. Na-ada ụra na ala na mmiri, wee kpuchie akwụkwọ.
Tupu Ome apụta, ala ekwesịghị ikpochapụ. Mgbe ihe dị ka izu abụọ pulite pụtara, ma ọ bụghị n'out oge. Ozugbo mkpụrụ osisi ahụ pụtara, a na-etinye igbe ahụ na windo (ọ bụ ihe amamihe dị na ya imechi windo ahụ site na anyanwụ).
Mgbe ohia na-egosi ihe ise na ise, i nwere ike igbanwe ya n'ala. A ghaghị ịhọrọ oge mgbe enweghị ntu oyi na-atụ, na mpaghara ebe ugwu, nke a bụ mmalite nke June.
Ihe omuma banyere esi agba lemongrass osisi adighi ezuru. Ọ dị mkpa iji chọpụta ebe ịkụ mkpụrụ na ilekọta ha. Maka ezi uto, a na-emepụta ihe ọkụkụ ma kpuchie ya na ihe ndị a na-etinyeghị na ya.
Lemongrass nwere mmasị na penumbra, ọ ga-adaba na mgbidi dị n'ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụlọ ma ọ bụ ụlọ ubi. Na nkeji mbụ nke oge okpomọkụ, a na-agba mmiri mmiri kwa mgbede, kama ọ bụ nke ọma. Mkpuru osisi kwesiri igbo ma wepu ala gbara ha gburugburu.
N'ụbọchị mbụ nke August, a na-ewepụ ihe mkpuchi ahụ site na Ome, kpuchie ya na October na akwụkwọ akọrọ. N'afọ mbụ, osisi ahụ na-eto nwayọọ nwayọọ ma ọ dịghị achọ ọgwụgwọ pụrụ iche. A na-akụ Lemongrass n'otu ebe na-adịgide adịgide n'ogige naanị mgbe ọ gachara afọ abụọ.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-eziga mkpụrụ site na mail, dịka ọmụmaatụ, dee nkọwa na ọkwa nke ụlọ akwụkwọ.
Usoro nke grafting maka Schizandra Shia na-eme naanị site na mkpokọta okpomọkụ. Osisi a nwetara n'uzo di otu a na-amuta nkpuru maka afo ato.
Mmasị Na China, a na-eji lemongrass mee ihe maka ọgwụgwọ na narị afọ nke asaa. N'ebe ahụ, a na-akpọ ya "beri nke ise": anụ dị ụtọ, pulp bụ uto, mkpụrụ osisi ahụ dị ilu na tart aftertaste, ọgwụ ndị sitere na lemongrass dị nnu.
N'etiti etiti June, nwa-acha odo odo-agba aja aja, a na-ehichapụ mkpụ akwụkwọ osisi. Onye ọ bụla n'ime ha kwesịrị inwe atọ ma ọ bụ anọ buds. Bee oblique bee n'okpuru ala akụrụ. Mgbe ụbọchị ole na ole nọrọ na mmiri.
Ọ ka mma ịkụ mkpụrụ na griin ha na ala na-ekwo ekpo. Site n'elu, ha na-ekpuchi ya na ájá ájá ihe dị ka cm 4. Nnata dị n'agbata cuttings bụ 5 cm. N'otu oge ahụ, mkpuru osisi dị ala, ala elu dị 5 cm n'elu ya.
Mgbe ị mụtara otú e si agba lemongrass cuttings, tụlee iwu maka ilekọta ha. Mgbe ọ kụrụ, ọ dị mkpa ịwụsa ma kpuchie ya na ihe anaghị etinye ya. Ihe ọzọ na-agba na-aga n'elu ákwà. Mgbe ụbọchị iri atọ, mgbọrọgwụ ahụ malitere.
Na usoro a, pasent nke mgbọrọgwụ bụ obere - ọkara nke mkpụrụ osisi a kụrụ. Ndị dị otú ahụ bụ mwute obi nke kere lemongrass cuttings.
N'August, e wepụrụ ụlọ ahụ, na n'oge mgbụsị akwụkwọ, a na-egwu olulu ya na clod nke ala. Chekwaa tupu kụrụ n'ime okpuru ulo, ịtụba na moistened sawdust.
Ntị! Akwụsịla ịkpụ osisi maka oyi n'ime griin haus: ọbụna mgbe ha na-echekwa ụlọ, ha na-efunahụ.
Ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji gbasa lemongrass - bụ ịmụba ya site Ome. Ndị okenye na-akpụ akpụ nwere ọtụtụ Ome na buds. A na-ekewa ndị na-eto eto site na alaka nne na nna ma jiri ya mee ihe.
Osisi na-emepụta afọ nke abụọ nke ndụ. N'ebe ugwu, ọ ka mma ịkụ ihe na mmiri, tupu buds amalite, na ihe ndịda ka ọ ga-ekwe omume na ọdịda.
Maka mmeputakwa nke lemongrass site na nkerisi ohia site na rhizome, ngalaba nke nkpisi 5-10 cm na abuo abuo di iche. Mgbe ekewaputara Ome a kpuchie ya na akwa okwute ka mgbọrọgwụ ghara ihicha.
Eghapụtara na griin ha ma obu n'elu ihe ndina n'ime ala na-eme nri, nke kpuchiri 2-3 cm ala. N'ebe na-adịgide adịgide Ome na-akụ afọ ọzọ n'afọ.
Schizandra Shia bụ ngwa ngwa na-eto eto. Na nlekọta kwesịrị ekwesị, osisi ahụ nwere akwụkwọ na-egbuke egbuke na okooko osisi na-esi ísì ụtọ na mmiri na-acha ọbara ọbara na mgbụsị akwụkwọ. Osisi dị otú ahụ ga-eji ogige ọ bụla chọọ mma, ebe ọ bụ na ọ bụ osisi vaịn, gazebos, mgbidi ụlọ, arches. Mee ka ọ dị mfe, ọ bụrụ na ị na-azụlite lemongrass layering.
Maka mmepe mmepe nke lemongrass gburugburu ohia, i kwesiri ime uzo di ihe dika 20 cm miri ihe ndị a na-agbada alaka ma pịa ha na ala na osisi osisi. A na-ekpuchi ya na ụwa. Osisi ndị dị n'elu dị n'elu. Na oge opupu ihe ubi na n'oge okpomọkụ, ị ga-achọ mmiri na ịtọghe ala.
Site n'usoro a na-ahụ maka mmepe, ihe ndị fọdụrụ n'elu dị na eriri. Ka ọ na-arị elu, a na-etinye nkwado dị elu maka ya. Nke nta nke nta, ọ ga-ewe ụdị a chọrọ.
Kedu ka lemongrass si bipụta, ị ghọtara, ma osisi ahụ nwere ihe ọzọ: lemongrass nwere ala. N'ime oge mkpụrụ osisi, osisi vaịn na-etolite okooko nwoke, ụmụ nwanyị na-etolite ka ha na-etolite.
N'ime osisi toro eto, a na-edozi okooko osisi na ndị ọzọ: nke dị ala bụ ọtụtụ okooko osisi nwoke, onye nke etiti na-agwakọta ya, nke kachasị bụ nke ụmụ nwanyị.
Ala nke osisi ahụ abụghị àgwà dị mma: ọ na-adabere n'ìhè, iru mmiri, okpomọkụ, na nlekọta maka nri na nlekọta n'ozuzu ya.
Eggplant pests: nkọwa, mgbochi, akara jikoro
Ụdị German na akwa anyị: nduku "Ramos" - nkọwa nke ụdị dị iche iche na nkọwa zuru ezu na foto dị ukwuu
Esi emeso vaginitis n'ime ehi
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Otu esi agba Chinese Schizandra